y k, Author at
Author: y k
April 23, 2019 - by y k
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်ဟာ ကုသခြင်းထက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ စုံတွဲတွေမှာ များသော အားဖြင့် တစ်ယောက်ကထိခိုက်လွယ်တတ်ပြီး အဲ့ဒီအတွက်သင်ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့အရာတွေကို မြင်နိုင်အောင်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဆင့် ၁ : လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အချစ် သင့်ရဲ့နံရိုးလေးကို ရရှိလိုက်တဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာ အားလုံးဟာ ပျားရည်လိုချိုမြနေတယ်။ ချစ်သူလေးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ လိပ်ပြာလေးတွေဝဲနေပြီး အနမ်းလေးတွေ၊ အထိအတွေ့လေးတွေအကုန်လုံးဟာ အရူးအမူးဖြစ်စေတယ်။ မိနစ်တိုင်းသူ့ဆီကမက်ဆေ့လေးတွေမျှော်နေမိတယ်။ နဲနဲရူးကြောင်ကြောင်နိုင်ပေမဲ့ ဘယ်သူ့ဂရုစိုက်ရမှာလဲ.. အချစ်မှာလူတိုင်းရူးကြတာပဲ။ အဲ့လိုတွေခံစားနေရတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အချစ်တစ်ခုရှိနေတာ သေချာပါတယ်။ အခုခံစားနေရတာလေးကို …
အချစ်ဦး နဲ့ အချစ်ဆုံးတို့ ၏ ကွာခြားချက်
ရည်းစားဦးကို မြေးဦးရသည်အထိ မမေ့ဘူးဆိုတဲ့ စကားပုံလည်းရှိသလို အများကလည်း အချစ်ဆုံးနဲ့ ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ရည်းစားဦးကို မမေ့နိုင်ဘူးလို့လည်း ဆိုကြတယ်လေ။ ယောင်းတို့ရော အဲဒီစကားက မှန်တယ်ထင်လားဟင် ? ယောင်းတို့ရဲ့ အချစ်ဦးကို အချစ်ဆုံးရှိနေတာတောင် သတိရနေမိသေးလား ? အချစ်ဦးနဲ့ ဆုံမိတာနဲ့ ဒါမှမဟုတ် အချစ်ဦးအကြောင်း တွေးမိလိုက်တာနဲ့ ဘယ်အသက်အရွယ်အေထိရောက်ရောက် ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာတာပဲဆိုတာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြုံဖူးလား ? အက်ဒ်မင့်အတွက်တော့ …
အစပိုင်းမှာ မသိသာပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီအရာတွေ မရတာကြောင့် ပြဿနာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နှစ်ဦးသားချစ်မိပြီဆိုရင် အမျိုးသား တွေ လက်တွဲဖော် ဆီက မျှော်လင့်တဲ့အရာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ စစတွဲချင်းမှာ ဒီအရာတွေမရလို့ ဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့ အချိန်ကြာလာရင်တော့ ပြဿနာ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မဝေးနိုင်တဲ့အခါ နှစ်ဦးသား ပြဿနာ က တအုံ့နွေးနွေး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် ယောကျာ်း …
ဖားကန့်​တွင်​ နွံအိုင်​ပြိုကျ လူ ၃၀၀ ခန့်​ နစ်မြှုပ်သေဆုံးဟု ကနဦးသတင်းရ
”နွံကန်ကြီးကို လာကြည့်သူများ” ဖါးကန့်မြို့ရဲ့ အနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ ဗလခမှော်ဟာ ( 22.4.2019 ) ရက်နေ့ ည ညဉ့်နက်ပိုင်း ၁၁နာရီ အချိန်လောက်မှာ ကျင်းနံရံပြိုကျပြီးတော့ အပေါ်မှာရှိတဲ့ အရင်နှစ်က လုပ်ကွက်ဟောင်း နွံကန်ကြီးက ပေါက်ကျလာ ပါတယ် ။ ကန်ကြီးသလောက် တစ်ဖက်ထဲကိုပဲ ပေါက်ကျသွားတာမို့ ရေလမ်းကြောင်းကြီး တစ်ခုလိုဖြစ်ပြီး တွေ့သမျှအရာတွေ အားလုံးကို တိုက်ခိုက်ပြီး အနိမ့်ပိုင်း …
ချစ်သူရဲ့ အလုိုလုိုက်ချင်းခံရတဲ့ ကောင်မလေးတွေမှာ ဒီလိုအချက် (၅) ချက်ရှိပါတယ်…
April 22, 2019 - by y k
မိန်းကလေးတွေဟာ ပင်ကိုယ်သဘာဝကိုက ဆိုးချင်နွဲ့ချင်၊ ချွဲချင်တဲ့သူတွေပါ။ ဒါကြောင့်မို့ပဲ ကိုယ့်ကိုဖူးဖူးမှုတ်တဲ့ ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုရင် တမင်တကာ ဆိုးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းအောင်ပဲ ဆိုးတာပါနော်။ တစ်ခါတလေ အဆိုးလွန်သွားလို့ ချစ်သူကို ဝမ်းနည်းအောင်၊ စိတ်ဆိုးအောင် လုပ်မိတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြိတ်ပြီး အပြစ်တင်နေတတ်တာလည်း သူတို့ပါပဲ။ ချစ်သူက ဖူးဖူးမှုတ် ချစ်မှန်းသိလို့ ဆိုးနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေဆိုတာ ဒီလိုပါ။ (၁) …
ချစ်သူနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဒိတ်လုပ်ချိန်မှာ ရှောင်ရှားရမယ့်ကိစ္စများ
ပျိုမေလေးတို့ရေ….ချစ်ရသူနဲ့ဒိတ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာဟာ တကယ့်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်လေးတစ်ခုပါနော်။ သူနဲ့ပတ်သက်လို့ ပိုသိလာရတယ်၊ သူ့အကြောင်းတွေ ပိုနားထောင်မိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးတွေ ပျောက်ပျက်သွားခြင်းမရှိရအောင် ဒီလိုအကျင့်ဆိုးလေးတွေကို ရှောင်ကြဉ်တတ်ဖို့တော့လိုပါမယ်။ ၁။ အိုးတို့အန်းတန့်နဲ့ ရှက်ရွံ့နေခြင်း ပထမဦးဆုံးဒိတ်လုပ်ချိန်မှာ ရင်ခုန်ရင်တုန်ဖြစ်တာက သဘာဝဆိုပေမယ့်လည်း ငါစားနေတာ တအားပေပွနေလား၊ လက်မောင်းကြီးကတုတ်သလိုဖြစ်နေလား၊ ပါးစပ်ကများနံနေပြီလား စသဖြင့် အရာရာတိုင်းကို လိုက်တွေးပြီးတော့ စိတ်ပူမနေပါနဲ့။ အရှိအတိုင်းလေးနေလိုက်ပါ။ ၂။ တောင်းပန်စကားအပြောများခြင်း ကိုယ်စားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ် …
(၁၉၈၀)ဆယ်တန်းကျ ဆက်မဖြေနိုင် အလုပ်မရှိခဲ့ပါဘူး…အမေနဲ့ကုန်စိမ်းရောင်းရင်း ရွှေတာသွားတဲ့သူတွေစီးပွားဖြစ်လို့ ကိုလည်းချမ်းသာချင်စိတ်ကြောင့်ရောက်ခဲ့ပါတယ်… ကွယ်းယာပညာဘယ်လိုသင်ခဲ့ အမေ့ဆီကုန်စိမ်းလာဝယ်တဲ့ ဖေါက်သည်ကြီးက ကွမ်းယာဝယ်ခိုင်းလ်ိုကွမ်းသွားဝယ်ပေးရင်း ကိုယ်တွေကဖင်ပေါ့တော့ ကွမ်းဆိုင်ကခိုင်းတာ အကုန် ဝိုင်းလုပ်ပေးရင်း တတ်သွားတာပါဘဲ ကျန်တာကတော့ အလုပ်ကသင်သွားတာပါ ကွမ်းယာလုပ်ငန်းဘာ့ကြောင့်ရွေး ကိုယ့်အခြေနေက ရွှေတောရောက်ရင် နေ့စားအလုပ် သမားလုပ်မလား ဈေးရောင်းမလား ??အပင်ပန်းလည်း မခံနိုင် အရင်အနှီးလဲမရှိတော့ ဒီကွမ်းယာဘဲပေါ့ ရွှေတောသွားဘို့ ရက်ရွေးပုံ ဘယ်ရွေးနိုင်မှာလဲ ရောက်ဘူးတဲ့လူတွေ …
သင်ကို ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်လို့ တွေးပူနေတတ်တဲ့ ချစ်သူဆုိုတာ ဒီလုိုမျိုးပါ
သင်ကို အရမ်းချစ်ပြီး သင်ဘာပဲလုပ်လုပ် အမြဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ချစ်သူမျိုးရှိနေပြီလား။ တကယ်လို့ ရှိနေပြီးဆိုရင်တော့ သူ့ကိုနားလည်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်ကို အဆုံးရှုံးမခံနိုင်လောက်အောင်ကိုချစ်လို့ ဒီလိုတွေ စိတ်ပူနေတတ်တာပါ။ အဲ့လို သင့်အတွက်ကိုပဲ တွေးပူနေတတ်တဲ့ချစ်သူရှိနေပြီးဆိုရင် သူ့ကို အဆုံးရှုံးမခံလိုက်ပါနဲ့။ (၁) သူနဲ့မဆိုင်တဲ့ status လေးတစ်ခုတင်မိလိုက်တာနဲ့ ဘယ်သူနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ သူကျတော့ဘာလို့မပြောတာလဲဆိုပြီး ပြာပြာသလဲဖြစ်သွားတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုး ။ (၂) ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ သင်တင်မယ့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး …
အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် …မတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲသွားကြရင်ဝမ်းနည်းစရာ မလိုသလိုပြန်ပြီးလည်း မမျှော်လင့်ပါနဲ့
အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် …မတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲသွားကြရင်ဝမ်းနည်းစရာ မလိုသလိုပြန်ပြီးလည်း မမျှော်လင့်ပါနဲ့ ရေစက်ရှိလို့ ဆုံခဲ့ကြပြီးကံကုန်ရင် လမ်းခွဲကြရမယ် … ကံမကုန်သေးရင် ပြန်ဆုံတွေ့ဖြစ်ကြမယ်~~~ ဘဝရဲ့လှည့်ကွက်တွေအောက်မှာတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး မျှော်လင့်မထားတဲ့ ကံကြမ္မာမုန်တိုင်းဖန်တီးလာပြီဆိုရင် ထင်မှတ်မထားတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်လည်းတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဝေးကွာသွားကြရတာပါပဲ တစ်ကယ်တမ်းကြတော့ ရေစက်ရှိလို့ ဆုံတာထက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဝဋ်ကြွေးဆပ်ဖို့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ အနားမှာ ထွက်ခွါသွားသူကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ … သူကြောင့် ဝဋ်ဒုက္ခမှ …
မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး ပန်းမကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား
မိန်းကလေးတော်တော်များများကပန်းတွေကိုနှစ် သက်ကြပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာမှပန်းတွေကို အထူးတလည်မနှစ်သက်တဲ့မိန်းကလေးအနည်းစုလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ပန်းတွေကိုမနှစ်သက်တဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေ… အချစ်ကိုစဉ်းစားပုံအကြောင်းတွေကိုမျှဝေပေးမယ်နော်။ သူတို့လေးတွေဟာရုပ်ရည်အလှအပကိုစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းသူတွေဖြစ်ကြပြီး အရည်အချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလှအပကိုသာမြတ်နိုးတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ထူးကိ်ုယ်ချွန်နဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ရပ်တည်နေကြသူပါ…။ သည်းခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့အတွက် ရည်မှန်းချက်ကိုမြန်မြန်ရောက်လွယ်သလို သူများတကာရဲ့ချိုးနှိမ်မှုတွေကိုလည်းခံရတတ်ပါတယ်။သည်းခံတာကိုအခွင့်ကောင်းယူတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ဖော်ရွေတာကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါတတ်တာကြောင့် တိတ်တိတ် ပုန်းကိုယ့်ကိုမကောင်းကြံစည်ပြီးမနာလိုတဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ ရဲရင့်ထက်မြက်ပြီး အောင်မြင်ဖို့ကိုအမြဲတမ်းတွေးဆနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ရေး နဲ့ပတ်သတ် ရင်တော့ကံမကောင်းတတ်ကြသူတွေပါ။ သူတို့ဟာအင်မတန်ထက်မြက်နေတာကြောင့်သူတို့နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့သူရှားပါတယ်…။ လူတွေကပန်းမကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေကို မာကျောသလိုထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ အတွင်းစိတ်အရမ်းနူးညံတဲ့သူလေးတွေမို့…သူတို့ကိုချစ်မိတဲ့သူလေးတွေကအထူးဂရုစိုက်ပေးဖို့တော့ လိုမယ်နော်။ Credit:marry Unicode မိနျးကလေးတျောတျောမြားမြားကပနျးတှကေိုနှဈ သကျကွပါတယျ။ …